Mon GTI / GTC / GTU: နည်းပညာ website/blog အညွှန်း (၁)
နည်းပညာ website/blog အညွှန်း (၁)
(ကျွန်တော် ဒီဆိုဒ်အတွက် ဘာတွေရေးရမလည်းလို့ စဉ်းစားလိုက်တော့ ကိုယ်သွားခဲ့ ဖတ်ခဲ့ရတဲ့ website တွေ blog တွေထဲက ကောင်းနိုးရာရာလေးတွေကို ပြန်လည် ဝေမျှပေးချင်စိတ် ဖြစ်ပေါ်လာပါတယ်။ ဒါတွေကို သိပြီးသားလူတွေကို မရည်ရွယ်ပါဘူး။ Online page တွေနဲ့ မရင်းနှီးသေးတဲ့သူတွေ၊ Internet ကို အကျိုးရှိရှိ အသုံးချခြင်တဲ့ သူတွေကို ရည်ရွယ်ပါတယ်။ ဒီအထဲမှာ ကျွန်တော်တို့ Engineering နဲ့ ပတ်သတ်တဲ့ ဆိုဒ်တွေကို ဦးစားပေးဖော်ပြသွားမှာပါ။ ကျွန်တော်တို့ သူငယ်ချင်းတွေ အားလုံး အကျိုးရှိမယ်လို့ ယုံကြည်ပါတယ်ခင်ဗျာ။)
(၁) ကိုချောရဲ့ M&E
ပထမဆုံး မိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ ကိုချောရဲ့ M&E ဆိုဒ်ဖြစ်ပါတယ်။ စာရေးသူ နာမည်ကတော့ (profile အရ) ကိုချောဖြစ်ပြီး B.Eng(Mech.), RIT 1995 နဲ့ M.Sc (Mech. Engg), NUS 2001မှာ ဘွဲ့ရရှိထားသူ ဖြစ်ပါတယ်။ အသေးစိတ်ကိုတော့ User Profile မှာသွားကြည့်နိုင်ပါတယ်။ စာအမျိုးအစားကတော့ Mechanical and Electrical Engineering(M & E),Auto Cad,Environmental နဲ့ ပတ်သတ်တာတွေဖြစ်ပြီး Construction Industry ရဲ့ လုပ်ငန်းအတွေ့ အကြုံနဲ့ Knowledge များကို စေတနာ ရှိရှိ ရေးသားထားတာကို တွေ့ရှိရပါတယ်။
စာရေးသူကတော့ သူ့ရဲ့ ရည်ရွယ်ချက်များကိုတော့ အခုလို ရေးသားထားပါတယ်။
Construction Industry မှာ ဆယ်စုနှစ် တစ်ခုကျော် အတွင်း ရရှိခဲ့ တဲ့ အတွေ့အကြုံအချို့ နဲ့ လက်ရှိ နည်းပညာ အခြေခံ တွေ ကို မျိုးဆက်သစ်တွေ ဆီ လက်ဆင့်ကမ်းပေး နိုင်ဘို့ နဲ့ မိတ်ဆက်ပေး နိုင်ဘို့ အတွက် ပဲ ရည်ရွယ်ပါတယ်။ Blog မှာ အချက်အလက် တွေ ကို အတတ်နိုင်ဆုံး တိကျအောင် ဖော်ပြထား ပေမဲ့ အမှားတွေ ပါနိုင်ပါတယ်။ အသုံးချ နိုင်ဖို့ကတော့ ကိုယ်တိုင် လေ့လာ၊ ဆန်းစစ် သေသေချာချာ နားလည်ပြီး တာဝန်ယူနိုင်မှ လုပ်ပါ လို့ တိုက်တွန်း လိုပါတယ်။
Blog ရဲ့ လိပ်စာကတော့ (www.chawlwin.blogspot.com) ဖြစ်ပြီး Blog Title ကို Engineering Mechanical and Electrical System in Building လို့ ခေါင်းစဉ် ပေးထားပါတယ်။ လက်ရှိအချိန်ထိ ပိုစ့်အရေတွက်အရ (၂၂) ခု ရေးသားထားပြီး Categories အလိုက် side bar မှာ ဖတ်ရှုနိုင်ပါတယ်။
ကျွန်တော့်တို့ Blog ရဲ့ ပညာရပ်ဆိုင်ရာများ Links ကနေ တဆင့်လည်း သွားရောက် ဖတ်ရှုနိုင်ပါတယ်။
ကဲ သူငယ်ချင်းတို့အားလုံး ဗဟုသုတများတိုးပွားပြီး ကိုယ့်ရဲ့ Career မှာ Professional Engineer အဆင့်ထိ တက်လှမ်းနိုင်ကြပါစေလို့ ဆန္ဒပြု လိုက်ပါတယ်။
Posted by Min Thu at 17:28